Mba ho fanovana ho amin’ny tsara amin’izay… | NewsMada
Mihazakazaka ny raharaham-pirenena, na ampandehanina haingana. Na izany aza, tsy ho maika tsy faingana, na hanao hazakazaka arahin-tosika. Nahoana? Hatao anio ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao eo amin’ny filohan’andriampanjakana sy ireo masoivoho vahiny.
Rahampitso ihany ny fanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny vokatra ofisialin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Inona na ahoana koa? Hisy filohan’ny Repoblika vaovao vita fianianana sy hiasa avy hatrany, manomboka ny 25 janoary. Arahaba soa, arahaba tsara…
Mba tsy ho lany andro lava amin’ny fananganana andrimpanjakana intsony ny mpitondra. Toy izay nafitsoka farany teo, narirarira lava ny fananganana ny Fitsarana avo (HCJ), ohatra; farany, tsy nahita rariny sy rirany ka nianjera tamin’ny fifidianana mialoha ny fotoana tsy fidiny.
Handeha ara-potoana sy araka ny tokony ho izy amin’izay ny fitantanam-panjakana amin’izay mpitondra hoe vaovao eo? Hatao izay lazaina, lazaina izay atao. Tena hisy sy hiainan’ny rehetra amin’izay ny hoe fangaraharana, fisaraham-pahefana, fitondrana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna…
Manantena fiovana sy fanovana ny vahoaka. Mba tsy ho am-boalohany ihany ny fahamehana amin’ny famitana hazakazaka fa mandritra ny fe-potoam-piasana. Na ny an’ny tena sy ny fitondram-panjakana ihany no atao ho zava-dehibe. Maika avokoa ny zava-drehetra, indrindra ny fiainam-bahoaka.
Mila fanovana izao fiainam-pirenena izao, indrindra ny fiainam-bahoaka. Raha tsy manaiky izay fanovana ny toe-draharaha sy ny fiainana izay ny tena, ovaina sy miova ho azy… Izay ny fototry ny fahalovana izay ela izay? Heverina sy ekena ho ara-dalàna na mandeha ho azy ny fahapotehana.
Tsy misy intsony ny azo atao? Izay ny ilàna ny rivo-baovao, dingana vaovao… “Toe-tsaina aloha ny fanovana”, hoy ny filoha frantsay teo aloha, i Jacques Chirac. “Lalàn’ny fiainan’ny olombelona ny fanovana, tsy misy tokony hatahorana”, hoy ihany izy. Mba ho fanovana ho amin’ny tsara amin’izay…